paompy famahanana NEMA Single Phase ac motera môtô mpankafy telo dingana
Mpanamboatra maotera elektrika
Manana ekipa R&D matanjaka izahay, ary afaka mamolavola sy mamokatra motera Nema ac sy vokatra hafa araka ny sary na santionany natolotry ny mpanjifa. Ny ankamaroan'ny vokatray dia efa nahazo ny fanamarinana CSA/CUS,UL. Ary ny laboratoara dia nahazo mari-pahaizana avy amin'ny vondrona CSA / UL ho an'ny fitsapana mpanamboatra wttnessed ho an'ny programa fanamarinana mifototra amin'ny ISO / IEC 17025: 2005
Motor dingana tokana
Izahay dia manam-pahaizana manokana amin'ny Whosale single phase motor sy ny mari-pamantarana hafa amin'ny motera. Hatreto, Waylead dia namolavola tsy miankina 1 / 10-20HP, 48-250, 2, 4, 6, 8 andry, maherin'ny 2000 karazana maotera avo lenta sy mahomby.
Amin'ny maha orinasa matihanina môtô tokana fanao maotera, ny motera rehetra sy ny mpanodin-tsolika rehetra dia nandalo ny fanamarinana CSA & CUS, ary ny motera sasany koa dia manana fanamarinana UL. Ny kalitao sy ny famokarana eny an-toerana dia tantanan'ny "6S". Ampiharo ny fenitra iraisam-pirenena momba ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001.
Hatreto, Waylead dia namolavola tsy miankina 1 / 10-20HP, 48-250, 2, 4, 6, 8 andry, maherin'ny 2000 karazana maotera avo lenta sy mahomby. Amin'ny maha orinasa matihanina môtô dingana telo matianina anay, ny môtô sy ny mpandrindra ara-barotra rehetra dia nandalo ny fanamarinana CSA & CUS, ary ny motera sasany koa dia manana fanamarinana UL.
Waylead dia manana ekipa fampandrosoana, famokarana, fitantanana kalitao ary serivisy fanompoana. Afaka manao motera "namboarina" mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa samy hafa isika.
Ny oem 56 Frame Dripproof Three-Phase Jet Pump Motor sy ny processeur ara-barotra rehetra dia nandalo ny fanamarinana CSA & CUS, ary ny motera sasany dia manana fanamarinana UL ihany koa.
Afaka manao "tailor-made" Three-Phase JM Close-Coupled Pump Motor araka ny takian'ny mpanjifa samihafa. Ny moteranay rehetra dia aondrana any Etazonia, Kanada, Meksika, Japon, Aostralia, Nouvelle Zélande, Arabia Saodita, sns. Ny motera dia ampiasaina betsaka amin'ny fanamboarana hazo, compressor rivotra, blower, mpankafy, paompy rano, paompy hydraulic, sns.
Motor brake telo-dingana araka ny takian'ny mpanjifa samihafa. Ny moteranay rehetra dia aondrana any Etazonia, Kanada, Meksika, Japon, Aostralia, Nouvelle Zélande, Arabia Saodita, sns. Ny motera dia ampiasaina betsaka amin'ny fanamboarana hazo, compressor rivotra, blower, mpankafy, paompy rano, paompy hydraulic, sns.
Waylead dia nahazo sitraka tamin'ny mpividy iraisam-pirenena fanta-daza amin'ny kalitao tsara, vidiny mirary, fanaterana ara-potoana ary serivisy tsara. Waylead dia manantena ny hiara-hiasa aminao ato ho ato!
Izahay dia mifantoka amin'ny famolavolana vokatra avo lenta ho an'ny tsena ambony indrindra.Ny maotera nema ac mahazatra anay dia mifanaraka amin'ny fenitra NEMA, ary aondrana indrindra any Etazonia, CANADA, Meksika, Aostralia ary toerana hafa manerana izao tontolo izao.
Manana laboratoara fitiliana manokana izahay ary fitaovana fanaraha-maso mandroso sy feno indrindra, izay afaka miantoka ny kalitaon'ny motera nema ac.
Waylead Motor Manufacturer, izay fizarana iray an'ny Cixi Huili, dia nanoratra ny mari-pamantarana "WAYLEAD" tany Shina, Kanada ary Etazonia tamin'ny taona 2008. Waylead dia Orinasa tsy miankina nasionaly Hi-Tech izay manampahaizana manokana amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana, varotra ary fanompoana.
Ny motera elektrika avo lenta sy avo lenta avo lenta dia nohamarinin'ny Canada sy ny Departemantan'ny angovo amerikana tamin'ny 2007 sy 2010. Ny moteranay rehetra dia aondrana any Etazonia, Kanada, Meksika, Japon, Aostralia, Nouvelle Zélande, Arabia Saodita sy ny sisa. Ny motera dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny indostrialy sy ny fambolena toy ny Woodworker, Air compressor, Blower, Fan, Water Pump, Hydraul Pump, Pump Pump, Pool sy spa pump, Ice cream Machine, Baking Equipment ary garazin'ny varavarana, sns.